Nahoana no tena Mahavariana Natao hampiofanana Travel In Eoropa? | Save A Train
Home > Travel Europe > Nahoana no tena Mahavariana Natao hampiofanana Travel In Eoropa?
Nahoana no tena Mahavariana Natao hampiofanana Travel In Eoropa?
ny Felicity Dawn
Fiaran-dalamby Alemana, Fiaran-dalamby Switzerland, Travel Europe
Fotoana famakiana: 3 minitra(Last Nohavaozina: 27/03/2020)
Dia nandray ny fiaran-dalamby dia iray amin'ireo indrindra underrated ampy fitaterana maoderina. Rehefa intercontinental fiaramanidina mitaingina kokoa takatry ny isan-taona, fa ny fiaran-dalamby no eo amin'ny fiakaran'ny na aiza na aiza. Misy antony maromaro nandeha lamasinina dia iray amin'ireo fomba mahavariana indrindra hiampita sisintany iraisam-pirenena.
Ohatra, ny zavatra hita natolotry ny Bernina Express irery ihany no ampy hampiova finoana izay fiaramanidina mafana fo ho lalamby mafana fo. Mamelatra avy Chur sy ny St. Moritz in atsinanan'i Soisa tsara tarehy ny faritra avaratr'i Italia ny Tirano, ny Bernina Express koa dia antsoina hoe ny Toerana mahafinaritra indrindra lalamby dia eto amin'izao tontolo izao. Izany dia tanteraka ny sakan'ny 90 kilaometatra. Izany dia midika 4 ora cinematic Alpine ny endriky ny, vongan-dranomandry, riandrano lehibe, ary manaitra hantsana.
Rehetra ny tsara tarehy toerana manodidina dia hita amin'ny alalan'ny Express 'malala-tanana Vista varavarankely isaky ny mpandeha fiara. ny dia tonga amin'ny fara tampony ao amin'ny Bernina Pass. amin'ny 7,000 feet ambonin'ny ranomasina, ny handalo mora tezitra dia snowstorms. Mandritra izany fotoana izany, talaky masoandro Italia miandry anao amin'ny hafa ity farany dia. Toerana mahafinaritra ity mitaingina fiaran-dalamby dia tokony ho tsy maintsy amin'ny lalamby rehetra tia ny siny lisitra.
Mandritra izany fotoana izany, manatevin-daharana ny Express tamin'izany lisitra misy ny dB na Deutsche Bahn. Alemaina ny fiaran-dalamby-pirenena Network manome ny sasany amin'ireo Toerana mahafinaritra indrindra mitaingina akaikin'ny Reniranon'i Rhin. Ny lalana dia handray anareo amin'ny alalan'ny fomba fijery namely ny Alpes lohasaha sy ny tendrombohitra. Ohatra, ny fomba tsara indrindra mankasitraka Eoropa renirano lava indrindra dia amin'ny alalan'ny lalana izay mampifandray ny tanànan'i Mainz sy Cologne. Io lalana mitondra anao amin'ny alalan'ny fanahy havoana, korontam lapa, ary terraced tanim-boaloboka.
DB manome tsy tapaka mitaingina fiaran-dalamby izay Connect tanàna tahaka an'i Amsterdam, Copenhagen, ary Prague ho any Alemaina ny lehibe metropolises. Mitovy amin'ny Bernina Express, Tena mahafinaritra ny mahita fomba Eoropa ny afovoan'i. Tena tsy mahagaga izay CNN milaza ny Deutsche Bahn toy ny "Ny iray amin'ireo tena mahafinaritra Anarana Travel traikefa izay tsy anjara iray Mercedes-Benz 450. " Raha Eoropa ny fiarandalamby no tian'ny ankamaroany noho ny hazo fijaliana lava-tany sy ny cross-kaontinanta nandehanany, misy safidy hafa ho fohy kokoa ny fitenenana mahazatra mpandeha fiaran-dalamby. Ohatra, ny Berlin Ringbahn foana malaza eo mpizaha tany izay te tsotra hizaha fitsidihana tao an-tanàna. Afaka manandrana izany ho an'ny ny vidin'ny tapakila iray.
Tsy misy resaka ny mahavariana lamasinina nandehanany, raha tsy anisan'izany ny Trans-Siberia Express. Fantatra koa amin'ny hoe ny lava indrindra nandeha fiaran-dalamby eto an-tany, ny Trans-Siberia Express Mampifandray Moscow tany amin'ny faritra andrefan'i Rosia ho any amoron-tsiraka tanàna Rosiana Vladivostok in Atsinanana. Teny an-dalana, ny lalamby teo akaiky teo sampany ho any amin'ny tany tahaka ny Shina, Mongolia, ary Korea Avaratra. Maro toerana in Eoropa Andrefana, anisan'izany Amsterdam, manana gara izay tolotra mitaingina ny Trans-Siberia fiantsonana in St. Petersburg, Rosia. Tsy mahagaga àry raha maro no Eoropeana misafidy ny handray ny lamasinina, rehefa sahisahy east.
Nandeha lamasinina manodidina Rosia dia iray amin'ireo fomba mora indrindra mba handeha. Marina aloha, izany ihany koa ny iray amin'ireo slowest, amin'ny Ladbrokes milaza fa ny levitra natory fiaran-dalamby avy any Volgograd ho any Nizhny Novgorod maka 27 ora. Na izany aza, Rosia lehibe rafitra lalamby nahita be dia be ny asa tamin'ity taona ity, raha ny firenena nampiantrano ny fiadiana ny amboara eran. Maro mpankafy nahita bebe kokoa ao amin'ny firenena sy ny olona izay nandeha ho any amin'ny e lamasinina.
Izany no mahavariana iray hafa ary matetika-odian-tsy hita lafiny lalamby Tsidika. Azo antoka, misy na inona na inona toy ny olona sy ny traikefa ianao tojo teny an-dalana. Miomàna hihaona sasany mahavariana indrindra ny olona avy amin'ny manerana izao tontolo izao. Na inona na inona cross-tany dia ianao lamasinina tamin'ny, ianao mety miafara nahita namana iray na roa amin'ny mpiray levitra lavitra. Na ianao maka ny Toerana mahafinaritra Bernina Express, mivezivezy amin'ny firenena maro ao amin'ny Deutsche na ny Bahn na ny Trans-Siberia Express, na sasatra teny Glacier Soisa ny Express, izay The Culture Trip dia mamaritra toy ny dia izay mpifanandrina ny hitan'ny ny Bernina, nandehananay an-fiaran-dalamby dia maintsy ho iray amin'ireo zavatra mahavariana indrindra eo amin'ny fiainanao.
To get the best train experience in your life, ny mora indrindra amin'ny vidin-javatra sy ny nesorina ny saram isalasalana famandrihana, fampiasana Save A Train!
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, dia tsindrio eto: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/fascinating-train-travel-europe/ - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
I am a private blogger, love trains & Tsangatsangana, if you have spare time i would love if you comment on my posts, because it is important for me to get feedback from my readers, enjoy. - Afaka tsindrio eto raha antsoy aho